भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले खुट्टा धोएका महिलाको अवस्था कस्तो छ ? – The Public Today
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले खुट्टा धोएका महिलाको अवस्था कस्तो छ ?
विजय कुमार सिंह जेठ १४, २०७७ १०:४४ am
नयाँ दिल्ली, जेठ १४ गते : २४ नोभेम्बर २०१९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कुम्भ मेलामा पाँचजना सरसफाई कर्मचारीको खुट्टा धोएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा यसरी मजदुरलाई सम्मान गरेको भन्दै पाँच सरसफाई कर्मचारीको खुट्टा धोएका थिए । त्यस समय प्रधानमन्त्री मोदीले देशका हरेक मजदुरको सम्मान हुनुपर्ने र सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्ने बताएका थिए ।
उनले खुट्टा धोएका पाँच जनामध्ये दुई जना महिला थिए- चौबी र ज्योती । प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नै हातले खुट्टा धोएका उनीहरुको जीवनस्तर राम्रो हुने र प्रधानमन्त्री मोदीले विशेष ध्यान दिने अपेक्षा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीले उनीहरुको खुट्टा धोएको करिब डेढ वर्ष बित्यो । डेढ वर्षसम्म पनि उनीहरुको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन हुन सकेन । अहिले नोभेल कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका कारण भारतका हरेक मजदुर दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । उनीहरुको जीवन पनि लकडाउनका कारण समस्याग्रस्त बनिरहेको छ ।
लकडाउनका कारण कुम्भ मेलासमेत नभएकोले चौबी घरमै छन् । घरमै बसेर बाँसको टपरी बन्‍ने काम गर्छिन् । उनले बुनेका टपरी पनि लकडाउनका कारण बिक्री भइरहेका छैनन् । उनले बुनेका टपरीसमेत बिक्री नभएपछि दैनिक खानलाउन समेत समस्या भएको उनी बताउँछन् । उनले भनिन्, “सरसफाईको काम गरेर कमाएको केही पैसा बैंकमा जम्मा गरेको थिएँ । लकडाउनका कारण बैंकमा भएको अलिकति पैसासमेत निकाल्न पाएका छैनौं । अहिले लकडाउनले गर्दा मेला-ठेला सब बन्द छ । अब के खाने ? के गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले खुट्टा धोए पनि हाम्रो जीवनमा केही बदलाव आएको छैन । जस्तो थियौं अहिले त्योभन्दा पनि समस्यामा परेका छौं ।”
त्यसैगरी उनीसँगकैकी एक महिला हुन् ज्योती । प्रधानमन्त्री मोदीले उनकोसमेत सोही कुम्भ मेलामा खुट्टा धोएका थिए । ज्योती अहिले विभिन्‍न ठाउँमा साहुले ठेक्का लिएका ठाउँहरुमा सरसफाईको काम गरिरहेकी छन् । उनले तीन महिनादेखि तलब पाएकी छैनन् । उनले भनिन्, “हामीलाई मेलाबाहेक पनि विभिन्‍न ठाउँमा हाम्रा साहेब (मालिक) ले ठेक्का लिएका हुन्छन् । ती सबै ठाउँमा सरसफाईंको काम गराउँछन् । गेष्ट हाउसमा अन्य विभिन्‍न स्यानिटाइज् गराउने ठाउँमा । तलब पाएका छैनौं तीन महिनादेखि । घरमा रासन छैन ।”
यस्तो गर्मीमा काम नगरे यसअघिको पनि तलब नआउला भन्‍ने पीरले साहुले जता बोलायो त्यही काम गर्छिन् ज्योती । उनले भने, “कोरोनाको डर भए पनि हामीले दुख गरी काम गरिरहेका छौं । हाम्रो तीन महिनादेखि रोकिएको तलब पाउनुपर्‍यो । अर्को कुरा तलब बढाउनुपर्‍यो ।” ३० मे, २०२० मा प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका यी ‘पोस्टर वुमन’ को जिन्दगीमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन् । उल्टै लकडाउनका कारण समस्या थपिँदै गएको छ । बीबीसी